ဥရောပကစားတဲ့ | ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့လစာ | Goldman ကာစီနို
ဤသည် majorly ကံကောင်းပါစေတစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်တိုင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၌ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာပြင်သစ်တွင်ကစားလျက်ရှိရာယင်း၏သမိုင်းအဖြစ်ပြန် 17 ရာစုအဖြစ် traceable ဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ယနေ့ခေတ်လူကြိုက်အများဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းထဲကတစ်ခု, နှင့်လည်းအွန်လိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်.
ဂိမ်းသုံးမျိုးမူကွဲပြင်သစ်များမှာ, အမေရိကန်နှင့်ဥရောပ. အဆိုပါဥရောပ ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့လစာ နှစ်ခု၏ကျန်ထက်ပိုကစားနေသည်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်. အခြေခံပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆင်တူပါတယ်, ကျွန်တော်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိပေမယ့်. သငျသညျဤအရပ်မှဘယ်လိုဥရောပအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပါလိမ့်မည် ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့လစာ ကစားနေသည်.
အွန်လိုင်းဂိမ်းအွန်လိုင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးမှတဆင့်များအတွက်ပေးဆောင်နေကြ, ပါဝင်သည်ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းများ. သငျသညျကစားရန်သတ်မှတ်ထားကြသောအခါ, သင်အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်သောသိသာသောအရာတို့ကိုသို့မဟုတ် features တွေဘောလုံးကိုများမှာ, ဘီးနှင့် croupier ဆမ်း. ကစားနည်းသင်ဘောလုံးကိုတစ်လှည့်ဖျားလိုက်ကျလိမ့်မည်ထင်သောအိတ်ကပ်အပေါ်ထားကြပါတယ်.
ဤသည်ဥရောပ ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့လစာ ဂိမ်းရဲ့ကစားသမားပိုပြီးအကျိုးရှိဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူတို့ကိုအနိုင်ရတဲ့၏မြင့်မားအခွင့်အလမ်းတွေကိုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါအိတ်ကပ်မှသုညကနေရေတွက်လျက် 36, ဒါဟာအောင် 37 အနက်ရောင်ပြောင်းနှင့်အတူအိတ်ကပ်, အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်များ.
ဘီးတွင်, အဆိုပါအိတ်ကပ်၏အမိန့်ကျပန်းဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းငှါ,, သင်ကလေ့လာသည့်အခါပေမယ်ကောင်းစွာသင်သူတို့တစ်တွေသင်္ချာအမိန့်အစီအစဉ်ရှိသည်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါအစီအစဉ်အားလုံးနံပါတ်များကိုအပေါ်အညီအမျှအနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပြန့်နှံ့ဖို့တိကျတဲ့ထုံးစံ၌တည်ရှိ၏. ဘီးအပေါ်နံပါတ်များ၏အစီအစဉျတှငျအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ပုံစံရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်. သူတို့, သို့သော်, ဿုံမြင့်အနိမ့်အကြားအခြား, အရာများမှာ 19 - 36 မြင့်မားသောအဘို့နှင့် 1 - 18 အနိမ့်အဘို့, ဘယ်မှာတစ်ခုချွင်းချက်နှင့်အတူ5အိမျနီးခငျြးမြား 10.
သင်စားပွဲပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောလောင်းကစားပုဒ်မပေါ်တွင်သင်၏ချစ်ပ်နေရာဂိမ်းကိုစတင်ရန်. ဘောလုံး croupier အားဖြင့်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်သည်အထိတစ်ဦးကကစားသမားအလောင်းအစားအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. အနိုင်ရအရေအတွက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပြီးနောက်, အဆိုပါ croupier အနိုင်ရကစားနည်းထွက်ချေ. ဥရောပ၏လေးနက်သောကစားသမားများ ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့လစာ သူတို့ကစားနည်းအားမရအတွက်အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါစေရန်.
အတွင်းပိုင်းကစားနည်း - အနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုငယ်များဖြစ်ကြသည်သို့သော်သင်အနိုင်ရသည့်အခါ, နိုင်ငွေမြင့်မား.
အပြင်ဘက်တွင်ကစားနည်း - ဒီနေရာမှာအနိုင်ရ၏ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်, သငျသညျအနိုင်ရသည့်အခါပေမယ့်ဆုကြေးငွေနိမ့်များမှာ.
ဥရောပကစားတဲ့အတွက်အပိုဆောင်း option ကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာဘီးကိုယ်စားပြုပြီးကအပွေးပွိုငျလမျးသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခကစားနည်းအဖြစ်လူသိများသည်. ဒီကိစ္စမှာ, ကစားသမားများကမေတ္တာရပ်ခံအခါကစားနည်းနေရာနိုင်သူကိုသာဦး croupier ဖြစ်ပါသည်.
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ, နှင့်ပိုပြီးသင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်ပိုပျော်စရာအဲဒါကိုကစားရန်ဖြစ်လိမ့်မည်. အဓိကဆုကြေးငွေသိသာသင်စေမည်သောအနိုင်ပေးဖြစ်ပါသည်.